Kubadda waalka birta ah iyo kursiga waa qaybaha muhiimka ah ee birta fadhida.
Birta illaa Qalabka Birta iyo Qalabka Giraanta Fadhiga.
Kubadda waalka birta ah iyo kursiga waa qaybaha muhiimka ah ee birta fadhida. Waxaa loogu talagalay cadaadis aad u sarreeya, heer kulka iyo xaaladaha abrasive, sida goynta ama isku xirka dhagaxyada adag, slurry dhalaalay, awoodda dhuxusha, qashin qubka, biyaha uumiga ama dareeraha kale iwm. Qalabka + kursiga xirmooyinka xalka macaamiisha maxaa yeelay kubbada iyo kursiga waxay ubaahanyihiin dhicid kahor intaan loo dirin si ay ugu adeegaan. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan soo saarnay waxyaabo gaar ah ...
Birta birta iyo Kursiga-2
Magaca Badeecada Ball Trunnion Ball QC-T01 Size ： NPS 6 ”~ 40” （DN150 ～ 1000 R Qiimeynta Cadaadiska: Fasalka 150 ~ 2500 (PN16 ~ 420) Waxyaabaha Aasaasiga ah: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L) , A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy iwm, Coatings:: : kiiska duuban-kartoonka-sabuurad- kiiska plywood. Wax soo saarka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo sawirka ka imanaya macaamiisha
Magaca Badeecada: Cabbirka Kubbadda Trunnion: 4 "~ 48" Qiimeynta Cadaadiska: Fasalka 150 ~ 2500 Waxyaabaha Aasaasiga ah: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A / F51 / F53 / F55, A564 630 (17-4PH), Inconel625, Incoloy825, Inconel 718, Monel, Alloy iwm. 2-Ra0.4 Roundness: 3/8 ”-32”: 0.015mm 32 ”-48”: 0.02mm Coaxiality: 3/8 ”-32”: 0.02mm 32 ”-48”: 0.03mm xirxirida: xumbo duubka- Kaarto ...
L-nooca seddex geesood kubbada QC-302
Magaca Badeecada ： L-nooc seddex kubad ah QC-302 Cabbirka ： NPS 2 ”~ 16” （DN50 ～ 400） Qiimeynta Cadaadiska: Fasalka 150 ~ 600 (PN16 ~ 100) Qalabka Aasaasiga ah: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy iwm. Dayaxgacmeedka * Xirxirida Inconel: kiiska xaashida-kartoonka-guddiga- plywood. Wax soo saarka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo sawirka ka imanaya macaamiisha
Kubad gaar ah QC-S05
Magaca Badeecadda ： Specialball QC-S05 Size ： NPS 2 ”~ 12” （DN50 ～ 300） Qiimeynta Cadaadiska: Fasalka 150 ~ 300 (PN20 ~ 50) Qalabka Aasaasiga ah: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy iwm. kiiska-kartoon-kartoon-guddiga- plywood kiiska. Wax soo saarka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo sawirka ka imanaya macaamiisha